Nohadihadian’ny zandary nandritra ny adiny telo: nanizingizina ny fahitany ireo karandohan’olona i Elisabeth | NewsMada
Inona no marina mikasika ilay savorovoro tao Morarano, Toamasina ? Asa, fa mbola nanizingizina ny fahitany ireo karandohan’olona tao amin’ilay trano saika hiasany, tamin’ny zandary nanao famotorana azy, ny alarobia teo R. Elisabeth.
Naharitra adim-pamantaranandro telo ny fakana am-bavany an-dRavaonirina Elisabeth, 21 taona ilay tovovavy nilaza ho nahita karandohan’olona tao amin’ny tokantrano iray mitady mpiasa ao amin’ny “4 chemins” Morarano Toamasina. Taorian’ny fiantsoana nataon’ny zandary tamin’ny rain’ity tovovavy ity dia nentin’ny rainy nanaovana famotorana tao amin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena misahana ny fikarohana sy ny ady heloka bevava ao amin’ny tobin’ny zandary amoron-dranomasina, Ravaonirina Elisabeth. Nanomboka tamin’ny 2 ora sy 30 mn tolakandro ny fakana am-bavany azy, ny alarobia teo ka tamin’ny 5 ora sy 30 mn vao nifarana ny famotoran’ny zandary azy. Nohenoin’ny zandary ihany koa taorian’ny famotorana azy ny rainy. Nandritra ny famotorana, mbola nanizingizina hatrany momba ny fahitany karandohan’olona tao amin’ity tokantrano ity ilay tovovavy nitady asa tao amin’ity tokantrano ity. Niezaka nandositra avy hatrany izy raha nahita izany karandohan’olona sy taovan’olona tao amin’ny efitrano fidiovana tao amin’ilay tokantrano mitady mpiasa ka izao niafara tamin’ny savorovoro izao ny raharaha.
Nasain’ny mpiambina nandositra izy…
Nohamafisin’ity tovovavy ity hatrany, nandritra ny famotorana azy fa ny mpiambina tao amin’ilay tokantrano mitady mpiasa aza niteny taminy hoe mandehana mandositra haingana fa sao maty eo noho ny hatairana tamin’ny fahitana ireto taovan’olona sy karandohan’olona ireto. Tsiahivina fa herinandro anio sahady ity raharaha miteraka fifamahofahoan-dresaka momba ny fisiana halatra taova ao Toamasina ity. Misy ny trafikana taovan’olona sy/na pakta satanika ao Toamasina? Fanakorontanana saim-bahoaka? Hatreto aloha tsy fantatra marina ny momba ity raharaha ity fa mijanona no tsilian-tsofina ihany, saingy ny valin’ny famotorana nataon’ny zandary kosa no hamantarana ny marina rehetra na misy na tsy misy ity resaka filazana momba ny halatra taova ity. Marihina fa niteraka hatezeram-bahoaka tao Toamasina momba ity raharaha ity ka niafara tamin’ny fanapoahana grenady lakrimozena mihitsy aza izany nanaparitahana ireo andian’olona nikasa hiditra an-keriny hanao fitsaram-bahoaka tao amin’ity tokantrano voalaza fa nahitana taovan’olona ity. Vaky tratran’ny tora-baton’ireo mpanao fihetsiketsehana ny fiaran’ny polisy tamin’ny fotoana nandravana ireo andian’olona marobe ireo.